Qalabka Kala-baxa ee Ellicott ayaa si guul leh loogu tijaabiyay River Jhelum
Jammu iyo Kashmir: Ellicott Dredgers ayaa si guul leh loogu tijaabiyay wabiga Jhelum
Laba qalab oo casri ah oo laga soo saaray Mareykanka ayaa si guul leh loogu tijaabiyay webiga Jhelum, ayagoo banaynaya daahfurka mashruuca ilaalinta ee dooxada taas oo ay khalkhal galisay boobka iyo wasakheynta sannadihii ugu dambeeyay.
Saraakiisha ayaa sheegay in Mashruuca Ilaalinta ee Jhelum uu bilaabi doono Chief Minister Omar Abdullah oo laga keenayo waqooyiga degmada Kashmir ee Baramulla dhamaadka bishaan. Labada dredgers waxaa soo saaray Daraasaadka Mareykanka ee 'Ellicott Dredges'- mid ka mid ah soosaarayaasha gaboobay ee qalabka qalalan.
Dhacdo ahaan, Ellicott Dredges wuxuu u keenay dredger ugu horreeyay ee ilaalinta Jhelum ee 1960. Qufulka waxaa shaqaalay Ra'isalwasaaraha markaa Jawahar Lal Nehru.
"Ku dhawaad ​​seddex sano oo sano la soo dhaafay, wax qashin ah kama dhicin Jhelum. Tani waxay dhalisay inay lumiso awooddeeda qaadista sababtuna tahay kororka culus ee taraafikada gaar ahaan Baramulla. Kadib dadaallo culus, waxaan ka soo iibsannay mashiinadii ugu dambeeyay Mareykanka howlihii burburay oo qayb muhiim ah ka ah mashruuca ilaalinta Jhelum," Chief Injineer Waraabka iyo Xakamaynta Daadka, Muzaffar Ahmad Lanker u sheegay Greater Kashmir.
Waxaa lagu iibsaday qiime dhan Rs 12 crores, dredgers-yada loo yaqaan Soya II iyo Budshah II waxaa loogu talagalay inay kudhasho qoto dheer. “Mashiinada ayaa si guul leh loogu tijaabiyay magaalada Jhelum ee waqooyiga Kashmir waxaana calanka u dejin doona kooxda CM dabayaaqada bishan. Waxaan u adeegsaneynaa ilo kasta oo suurtagal ah si loo dhowro Jhelum,Lanker ayaa yidhi.
Wuxuu sheegay nadiifinta dariiqyada daadadku inay socdaan socodsiinta dagaalka si loo yareeyo halista daadadka xilliga xagaaga. “Si kastaba ha noqotee, caqabadda ugu weyn ee socodka qumman ee Jhelum waa marinka laga baxo ee Pohru Nallah ee Baramulla. Qulqulayaashu waxay ku habboon yihiin qabashada hawsha Herculean. Waxaan qorsheyneynaa inaan ka soo saarno 36 lakh mitir cubic cubic oo ka socota fidinta si loo hagaajiyo qulqulka Jhelum,Lanker ayaa yidhi.
Saraakiisha ayaa sheegay in Raiiselwasaarihii J&K ee markaa Bakshi Ghulam Muhammad dhamaadkii 50-meeyadii uu la xiriiray Dowlada India si ay u raadsato la talin khabiir ah iyo xalinta injineernimada dhibaatada. Iyadoo la raacayo hagida khubarada Komishanka Biyaha, Qorshe Master ah oo loogu talagalay qodista Jhelum laga soo bilaabo Wullar ilaa Khadanyar ayaa la sameeyay.
Mashruucu wuxuu saadaaliyay in qotada dheer iyo balaadhinta Jhelum laga bilaabo Ningli ilaa Sheeri laga bilaabo farsamada gacanta. Si kastaba ha noqotee wakhtigaas, haaraha alaabada laguma sameynin lagamana heli karo India. Saraakiisha waxay sheegeen inay ugu wacan tahay fara gelin shaqsiyadeed oo Raiisel wasaaraha markaas Jawahar Lal Nehru in la iibsado alaabada.Si kastaba ha noqotee, qalliinka qashin-qubka ayaa sii socday ilaa 1986. Waxaa loo hakiyey dhaqaale la'aan iyo tas-hiilaad la waayey. Tan iyo markaa tan tan tufaaxa faafa ayaa ka dhacday Jhelum sababtuna waxay tahay xaalufka degdega ah ee meelaha ay ku sugan yihiin. Tani waxay hoos u dhigtay waxtarka daadadka qulqulka qulqulka qulqulka Jhelum iyo mas'uuliyadiisa qaadista awoodda laga soo bilaabo 35000 cusecs ee 1975 illaa 20000 jaantusyada xilligan la joogo,Saraakiisha ayaa yidhi.
"Waxaan rajeyneynaa inaan helno dhaqaalo badan dhowaan. Waxaan isku mar wada bilownay shaqo aan ku fududeyneyno biyaha gudaha gudaha laga soo bilaabo Sonwar ilaa Chattabal. Wejiga labaad, hawlgal kan la mid ah ayaa laga bilaabi doonaa Khanabal ilaa Pampore, ”Ayuu yidhi Lanker.
Lankar wuxuu sheegay in dib u dhiska Chattabal Weir ee Srinagar qadiimka ah ay gacan ka geysan doonto in la joogteeyo heerka biyaha ee Jhelum laga bilaabo Islamabad ilaa Srinagar oo kor loo qaado qulqulka marinnada daadku ay ka mid yihiin Sonar Kul iyo Kuta Kul.
Wuxuu sheegay in dhammaan xogta la xiriirta qaadashada iyo qaadashada heerarka biyaha, cabirka daadadka iyo awooda xambaarsiga Jhelum ee sanadihii 50 ee lasoo dhaafay la qatay. “Waxaa naga go'an dib u soo celinta sharafta masiixiga ah ee Jhelum. Haddii wax waliba ay u socdaan sidii qorshuhu ahaa, sanadaha yar ee soo socda horumar baaxad leh ayaa laga helayaa xaaladda Jhelum, ”Lanker ayaa yidhi.
Waxaa laga daabacay Kashmir weyn